10 Mhando dzeYouTube Vhidhiyo Dzinobatsira Kukura Bhizinesi Rako Diki | Martech Zone
Kune zvakawanda kuYouTube pane katsi mavhidhiyo uye zvinokundikana kusangana. Muchokwadi, kune zvimwe zvakawanda. Nekuti kana iwe uri bhizinesi nyowani kuyedza kukwidziridza chiziviso kana kukurudzira kutengesa, kuziva kunyora, firimu, uye kukurudzira YouTube mavhidhiyo kwakakosha Hwechipiri-zana ramakore kushambadza hunyanzvi.
Iwe haudi hombe bhajeti yekushambadzira kuti ugadzire zvemukati zvinoshandura maonero mukutengesa. Zvese zvinotora ndeye smartphone uye mashoma matanho ekutengesa. Uye iwe unogona kudzidza kuti zvayakanakira kuzviita sei neHeadway Capital gwara kune iyo 10 mavhidhiyo eYouTube ayo bhizinesi rega rega rinofanira kuve nawo.
Nei Uchiita YouTube Mavhidhiyo Ebhizinesi Rako?
Makambani anoremekedza simba reYouTube ari kuzviratidza kune chetatu chevashandisi vese veinternet. Inofungidzirwa kuti vanhu vanopfuura mabhiriyoni maviri vanoshanyira YouTube mwedzi wega, nenhamba yakakura yevashandisi vachipinda mazuva ese. Chii chimwezve, mushure meGoogle, YouTube ndiyo yechipiri injini yekutsvaga pasi rese. Izvo zvinoita kuti ive imwe yenzvimbo dzekutanga vatengi vanogona kuenda kana vachitsvaga ruzivo nezve zvigadzirwa nemasevhisi.
Zvinotonyanya kukosha, vhidhiyo yeYouTube yakanyatsogadzirwa ichawedzera rako rekunyora uye yekutengesa. Tsvagiridzo naHeadway Capital yakawana kuti 73% yevanhu vanogona kutenga chigadzirwa mushure mekuona kuratidzwa kana kuongorora vhidhiyo. Pakazara, zvigadzirwa zvemavhidhiyo zvinowedzera mukana wekutengwa neinosvika 150%.
Ndeapi Mhando dzeVhidhiyo yeYouTube Anofanirwa Kuita Bhizinesi Rako?
Iwe unoziva nei uchifanira kugadzira YouTube mavhidhiyo. Saka ikozvino yave nguva yekufunga kuti ndeipi vhidhiyo yekugadzira.
Iwe unogona kuenda nechero rakananga chigadzirwa spotlight vhidhiyo. Iyi ndiyo imwe yenzira dzakanakisa dzekuratidzira chigadzirwa chitsva uye kuratidza maficha uye mabhenefiti.
Sei-Ku mavhidhiyo imwe sarudzo. Kunge vhidhiyo inotaridzika, How-To zvemukati zvinoita kuti vatengi vaone chigadzirwa muchiito, ichivapa chivimbo chekuti inoita basa rakashambadzirwa. Ivo zvakare vanomiririra yakanakisa sevhisi sevhisi uye inoderedza kukakavara mapoinzi mune rako bhizinesi Kupfura vhidhiyo yemaminetsi mashanu-kudhura zvakanyanya kudhura pane kuhaya vashandi vashanu kutora mafoni kana kupindura maemail kubva kune vatengi.
Uchapupu mavhidhiyo anoratidza vanhu chaivo kana vanokurudzira vanoratidza kugutsikana kwavo nezvako zvigadzirwa. Rudzi urwu rwezvinyorwa zvinogadzira pfungwa yechokwadi uye kuvimba. Vanhu vane mukana wekutenga chigadzirwa zvichibva pane zvinokurudzirwa kubva kune vezera ravo kana mumwe munhu anogovera hunhu hwavo kana sarudzo yemararamiro.
Chekupedzisira, pane asina unboxing nekutenga dhonza mavhidhiyo. Aya mavhidhiyo anodzokorora pfungwa yemafaro uye kutarisira kwakabatana nekutenga kutsva.
Uye sezvo chero akanaka kushambadza maneja (kana mushandirapamwe wezvematongerwo enyika) achakuudza, isu vanhu hatisi sevane pfungwa sezvatinoda kufunga. Pane kudaro, tinowanzo ita sarudzo dzinoenderana nemanzwiro pane kutonhora zvakaoma chokwadi. Saka kana iwe uchikwanisa kumutsa manzwiro evateereri vako, uri mukana wekuvashandura kuva vatengi vanobhadhara.
Maitiro Ekugadzira YouTube Zvemukati Zvinotyaira Mhedzisiro?
Chinhu chekutanga chauchazoda zvimwe kit. Asi iwe haufanire kupaza bhangi pane inodhura rig rig. Mimwe yeYouTubers yakabudirira kwazvo inokwezva mamirioni emaonero vhiki rega rega pasina chimwe chinopfuura chakanakisa smartphone nekugadzirisa software. Kune mamwe mavhidhiyo akaomarara, kune akawanda evashandisi vezvakazvimirira zvemukati uye vamiririri veadhijitari vanopfura uye vagadzire zvirimo.
Iwe zvakare unoda a chinyorwa. Ichi chingangove chimwe chezvikamu zvakakosha zve chero mhando yezvinyorwa. Chinyorwa chinovaka chimiro; zvinotora muoni parwendo, achikurudzira manzwiro avo munzira uye achivatungamira kune chimwe chiito, sekushanyira webhusaiti kana kutenga.
Zvinyorwa hazvifanirwe kunge zvakaoma. Ingotarisa pane yakakosha matatu-chiito chimiro: kumisikidza, kunetsana, kana kugadzirisa. Mune mamwe mazwi, unoda pekutanga, pakati nepakuguma.
Kana iwe uri kuyedza kutengesa yakabata ruoko pombi bhasikoro, iyo nyaya inogona kuenda seiyi:
Guy anoenda kunokwira bhasikoro musango (achigadzika), anobva atora tai rakaputika uye akanamira musango (kunetsana), obva aburitsa pombi yake yebhasikoro, anokwidza vhiri, ndokukwira achienda achifara kupinda mukuvira kwezuva (resolution ). Mukomana ari pabhasikoro anogona kunge ari iye anotungamira, asi iyo chaiyo nyeredzi yekuratidzira ipombi yebhasikoro.
Heano mamwezve matipi ezve maitiro ekugadzira anotaridzika YouTube mavhidhiyo.
Tags: kuseri kwezviitiko mavhidhiyomavhidhiyo emhandoecommerce mavhidhiyomusoro wedhorobhainfluencer mavhidhiyoinfographicsangana nemavhidhiyo echikwatachigadzirwa wongororo mavhidhiyochigadzirwa mavhidhiyo anotaridzikakutora mavhidhiyokutenga mavhidhiyomavhidhiyo emabhizimusi madikismbStoryboardzvipupuriro mavhidhiyomhando dzevhidhiyo yeYouTubeunboxing mavhidhiyovhidhiyo kufona-ku-chiitovhidhiyo kubatanidzwavhidhiyo kuvhenekeravhidhiyo scriptvhidhiyo storyboardmatipi evhidhiyovoiceoveryoutube infographicyoutube metricsyoutube thumbnailYouTube VideoYouTube vhidhiyo scriptYouTube mavhidhiyoYouTube izwiver